मेयर वासुदेव घिमिरेले गृहमन्त्री खाँणलाई भेटे, सीताले पाउँलिन् न्याय ? « News24 : Premium News Channel
मेयर वासुदेव घिमिरेले गृहमन्त्री खाँणलाई भेटे, सीताले पाउँलिन् न्याय ?
काठमाडौं । तिलोत्तमा नगरपालिका– ४ की २७ बर्षीया सीता भण्डारी पौड्यालका लागि न्याय माग्दै नगरप्रमुख (मेयर) वासुदेव घिमिरेले गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणलाई भेटेका छन् ।
मंगलबार साँझ न्यूज २४ सँगको कुराकानीमा गृहमन्त्री खाँणलाई भेटर चाँडोभन्दा चाँडो घटनाबारे सत्य कुरा बाहिर ल्याउन आग्रह गरेको बताए ।
मेयर घिमिरेको कुरा गम्भीरपूर्वक सुनेर गृहमन्त्री खाँणले यस घटनाबारे चाँडो नै सत्यता बाहिर ल्याउने भनेर भनेको पनि उनले बताए ।
उनले भने, ‘मैले हिजो (सोमबार) गृहमन्त्रीजीलाई भेटेको हुँ । भेटमा भएपछि मैले सीताका लागि न्याय माग्दा उहाँले यसबारे चाँडै सत्य छानविन गर्ने बाचा दिलाउनुभएको छ ।’
शान्तिपूर्ण ढंगले आन्दोलन सहभागी हुने काम भयो । मैले बुझेको छु । डिएसपीसँग बुझेको छु । नगरपालिकाको तर्फबाट यो विषयमा बुझिरहेको छु ।
नेकपा एमालेको प्रथम विधान महाधिवेशनमा सहभागी हुन काठमाडौं आएका मेयर घिमिरेलाई प्रहरीको अनुसन्धानमा हत्या नभई आत्महत्या ‘सुसाइड नोट’ भनिएको अनुसन्धान प्रतिवेदनबारे सोध्दा उनले यसबारे अझैँ अनुसन्धान भइरहेको बताए ।
उनका अनुसार अदालत र प्रहरी प्रशासनमा घटनाबारे अनुसन्धान भइरहेकाले यहीँ हो भनेर बोल्न नसकिने तर, प्रहरीको प्रारम्भिक रिपोर्टमा भने आत्महत्या देखिएको छ । अनुसन्धानमा देखिएका सबै प्रमाणहरु जम्मा गर्न पाइने तर, घटनाको सत्य कुरा बाहिर ल्याउनुपर्ने मेयर घिमिरेको पनि माग छ ।
‘हामी अदालत, प्रहरी प्रशासन होइनौँ तैपनि हामी घटनाबारे सत्य कुरा बाहिर आउनुपर्छ भनिरहेका छौँ । अहिले पनि यसबारे अनुसन्धान भइरहेकाले हामीले घटना यहीँ हो भन्न सक्दैनौँ,’ उनले भने,‘घटनाबारे प्राप्त प्रमाणहरु संकलन गर्न सकिन्छ तर, सत्य कुरा बाहिर आउनुपर्छ । त्यसैले अब, जति सक्दो चाँडो घटनाको सत्यता बाहिर आउनुपर्छ भनेर भनिरहेका छौँ ।’
मेयर घिमिरेले नगरपालिकाले भदौ २७ गते प्रेस विज्ञप्ति जारी गरेर घटनाबारे सत्य छानविन गर्दा दोषी भेटिएको खण्डमा कडाभन्दा कडा कारवाही गर्न माग गरेको पनि बताए । साथै, भदौ २८ गते सर्वदलीय बैठक राखेर घटनाको निष्पक्ष र विश्वसनीय छानविन गरी दोषीलाई कडाभन्दा कडा कार्वाही गर्न र पीडित परिवारलाई न्याय दिलाउन भन्दै प्रहरी प्रशासनको ध्यानाकर्षण गरिएको मेयर घिमिरेले जानकारी दिए ।
भदौ २० गते सीताको मणिग्राम घरमा शंकास्पद मृत्यु भएको थियो । सीताको मृत्युपछि श्रीमान टिका पौड्याल, आमाजु विष्णु पौड्याल र जेठाजु हरि पौड्यालविरुद्ध जिल्ला अदालतमा माइती पक्षले उजुरी दर्ता गरेको थियो ।
त्यहीँ उजुरीक आधारमा पक्राउ परेका उनीहरुमाथि अनुसन्धान चलिरहेको छ । तर, अनुसन्धानकै क्रममा प्रहरीले सीताको हत्या नभई आत्महत्या भएको प्रतिवेदनसहित सुसाइड नोट पनि प्राप्त भएको जनाएको थियो ।
तर, पीडित पक्षले भने प्रहरी र चिकित्सकको मिलेमतोमा प्रतिवेदन बनावटी ल्याएको आरोप छ । त्यसपछि अहिले मृतकको माइती पक्ष भने सीताका लागि न्याय माग्दै दिनहुँजसो प्रदर्शन गरिरहेको छ ।